डाक्टर, ड्राइभर र दशा – Chitwan Post
डाक्टरले उपचार गर्छन् । उपचारमार्फत मान्छेलाई बाँच्न सजिलो पारिदिन्छन् । डाक्टरले मान्छेलाई मर्नबाट केही समयका लागि जोगाउँछन्, तर यिनले मृत्युलाई जित्दैनन् । मृत्युसँग लडिरहेका बिरामीहरुको तर्फबाट यिनीहरु मृत्युसँग जुध्छन्, तर हार्छन् । हारे पनि जित्ने आँटका साथ बिरामीको तर्फबाट मृत्युसँग जुध्ने मान्छे भनेको मह¤वपूर्ण मान्छे हो । डाक्टर सबै मान्छेलाई चाहिन्छ । डाक्टरलाई पनि सबै मान्छेको मद्दत र सेवा चाहिन्छ । डाक्टरलाई घर बनाउन प¥यो इन्जिनियर चाहिन्छ । नयाँ कपडा सिलाउन प¥यो टेलरमा काम गर्ने मान्छे चाहियो । अन्नका लागि किसानको मद्दत चाहियो । दूधका लागि गाईभैँसी पाल्ने किसान चाहियो । यही प्रकारले विभिन्न पेसामा आबद्ध मान्छेहरु डाक्टरलाई चाहिन्छ । हरेक मान्छे बाँचेको छ अर्काको मद्दतले । एकले अर्कालाई बाँच्न मद्दत गरिरहेका छन् । यति भईकन नेपाली नागरिक समाजमा अन्य पेसाका मान्छेलाई भन्दा डाक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण अल्लि फरक देखिन्छ, अर्थात् डाक्टरलाई मान्छेभन्दा अलिकति माथि देउताभन्दा थोरै तल राखेर सम्मान दिएको देखिन्छ । यही कारणले हुन सक्छ आज हुर्किंदो उमेरका बच्चाबच्चीहरु प्रायः डाक्टर बन्ने चाहना राख्छन् ।
अब यतिविघ्न मह¤व दिइएको डाक्टरको कामबारे त सबैलाई जानकारी छ, तर एउटा लुकेको मह¤वपूर्ण पाटोचाहिँ के हो भने यी डाक्टरहरु आफैँचाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न आजसम्म उठाइएको छैन । यो साँचो हो कि अरुलाई उपचार गर्ने डाक्टर आफू पनि स्वस्थ हुनुपर्छ । आफैँ बिरामी वा रोगी डाक्टरले अन्य रोगीहरुको उपचार कसरी गर्न सक्ला ? फेरि डाक्टर बिरामी हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि होइन होला । एउटा यस्तो अनुमान गरौँ कि कतै आफैँ बिरामी डाक्टरले त अन्य बिरामीको उपचार गरिरहेका छन् कि ? बिरामी डाक्टरले उपचार गर्दै गरेको अवस्था हो भने के त्यो बिरामी डाक्टरले अर्को बिरामीलाई निको पार्ला कि आर्यघाटको टिकट काटिदेला ? यो प्रश्न सामान्य होइन । यदाकदा सुनिन्छ– “डाक्टरबाट उपचारमा लापर्बाही भयो ।” होइन, डाक्टरले कहिल्यै लापर्बाही गर्दैन । लापर्बाही भन्ने शब्द नै डाक्टरको दिमागमा हुँदैन, तर डाक्टर आफैँ बिरामी हुन सक्छन्, कुनै रोगबाट पीडित भएका हुन सक्छन् र त्यस्तो बिरामी डाक्टरले उपचार गर्दा बिरामी घर जाला भन्दा घाटतिर जान सक्छ । हो, यही कारणले हो बिरामी जाँच्नका लागि, बिरामीको अप्रेसन गर्नका लागि डाक्टर स्वस्थ हुन जरूरी छ । हुन यस्तो पर्छ कि उपचार गर्ने डाक्टर सम्पूर्णरुपले तन्दुरूस्त हुन जरूरी भएकाले पनि अब हरेक डाक्टरले आफ्नो सम्पूर्ण स्वास्थ्य अवस्था ठीक राख्नुपर्छ, आफू बिरामी भएको समयमा बिरामीको उपचार गर्ने काम कुनै पनि हालतमा गर्नुहुन्न । कहिलेकाहीँ डाक्टरले मान्छे कुटेको खबर आउँछ त कहिले एक डाक्टरले अर्को डाक्टरको करङ भाँच्न भाडाका गुन्डाहरु प्रयोग गरेको समाचार पनि आउने गरेको छ । मान्छे कुट्ने डाक्टर र सहकर्मी डाक्टरको करङको रिस गर्ने डाक्टर मानसिकरुपले अस्वस्थ छन् भन्ने बुझ्न ढिला गर्नुहुन्न र यस्ता डाक्टरले उपचार गर्दा बिरामीको ज्यान तलमाथि हुन सक्छ भन्नेतर्फ सबैपक्षले बेलैमा होसियारी अपनाउँदा कल्याण हुन्छ ।
अब अर्को डेन्जर विषय ड्राइभरसँग सरोकार राख्छ । चितवन पोष्टका पाठकहरुका लागि यो लेख तयार पार्दै गर्दा धादिङको सलाङघाटमा बस दुर्घटनामा परी कम्तीमा ३२ जना मान्छे मारिएका छन् । लास भेटिएका र बेपत्ता भएका भनिएका सबै मरेकै हुन् । यति ठूलो संख्यामा नेपाली जनता एकै चिहान भएको यो पहिलो घटना होइन । यस्ता घटनाहरु पटकपटक भएका छन् । होनहार नागरिकहरुको क्षति भएको छ । तर, यतिविघ्न डरलाग्दो पाराले जनताको ज्यान जान्छ तर किन दुर्घटना भयो र कसरी भयो भन्नेतर्फ कहिल्यै यो देशमा खोजी भएन । ड्राइभरले पनि जानीजानी दुर्घटना गराउँदैन । ज्यानको माया त ड्राइभरले आफ्नो पनि गर्छ । दुर्घटनामा उसको पनि ज्यान जान सक्छ । तर, यहाँ पनि ड्राइभरको स्वास्थ्य अबस्थाबारे कुरा उठ्छ । सबै ड्राइभरहरु बिरामी छन् भनियो भने गलत हुन्छ, तर सबै ड्राइभरहरु स्वस्थ छन् भनियो भने पनि गलतै हुन्छ । अब बिरामी ड्राइभरले गाडी हाँकेका छन् भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? त्यही हुन्छ जे सलाङघाटमा भयो ।
सलाङघाट दुर्घटनामा ड्राइभर निदायो भनियो । ड्राइभर निदाएका कारण दुर्घटना भयो भन्नुको अर्थ पनि आखिरमा गएर स्वास्थ्यसँग गाँसिन्छ । ड्राइभरले मादक पदार्थ सेवन गरेको थियो वा लागू पदार्थको अम्मली थियो वा उच्च रक्तचापको रोगी थियो वा छारेरोग वा त्यस्तै खाले कुनै रोगबाट ग्रस्त थियो र बिरामी ड्राइभरकै कारण झन्डै तीन दर्जन मानव क्षति भयो । फेरि पुरानै प्रश्न खडा हुन्छ कि अब ड्राइभरहरु स्वस्थ हुनुपर्छ वा पर्दैन ? जवाफ त सकारात्मक नै आउँछ । उसो भए, देशभरिका ड्राइभरहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने वा नगर्ने ? अनुमान गर्नेहरु यसखालको अनुमान गर्छन् कि यदि देशभरिका सार्वजनिक सवारीसाधन हाँक्ने ड्राइभरहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो भने एचआईभी संक्रमित, उच्च रक्तचापका रोगीहरु, मधुमेहले गालेका, क्षयरोगले ग्रस्त, मानसिक रोगका ओखती सेवन गरिरहेका ड्राइभरहरु टनाटन भेटिन्छन् । ओहो ! यदि यो अनुमान स्वास्थ्य परीक्षणबाट सत्य सावित भयो भने कतिसम्मको भय सिर्जना होला यो देशमा ?
अहिले आएर नेपाल सरकारले लामो दूरीमा चल्ने बसमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । हो न हो सरकारलाई पनि लाग्यो, लामो रूटमा गाडी चलाउँदा ड्राइभर थाक्यो र निदायो, यही कारण बस दुर्घटना भयो । यसको ओखती अर्को एउटा ड्राइभर थप्नु हो । सरकारी प्रयासलाई धन्यवाद दिन ठीक हुन्छ । उसले जे जान्यो त्यही उपायो रच्यो । नजान्नु अपराध होइन । सरकारले जे जान्यो त्यही ग¥यो, तर यो समस्याको सही समाधान वा ठीक उपचार हुँदै होइन । अब अर्को एउटा रोगी ड्राइभर थपेर गाडी हाँक्न दिँदा कसरी यात्रुहरु सुरक्षित होलान्, यो तर्फ कसैले अहिलेसम्म सोचेका छैनन् । अब समस्या कहाँनेर छ भने यो देशले आजसम्म कति हेभी सवारी चालक नेपालभित्र छन् भन्ने कुरा हेक्कै राखेन । स्वास्थ्य परीक्षण गरेरमात्रै थप ड्राइभर राख्ने कुरा गरियो भने पनि यतिबेला देशभित्र चल्ने सबै लामा दूरीका सवारीसाधनका लागि ड्राइभर पुग्दैन ।
देशभित्रका हेभी सवारीसाधन हाँक्दा मनग्य आम्दानी नहुने देखेपछि हजारौँको संख्यामा हेभी सवारी चालकहरु विदेशिएका छन् । फेरि आजसम्म सरकारी तवरबाट जनताको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी ड्राइभर उत्पादन कार्य सञ्चालन भएको छैन । निजी तवरबाट ड्राइभर उत्पादन प्रक्रिया चालू छ र लाइसेन्स बेच्ने कामचाहिँ पहिले पुलिसले गथ्र्यो भने अहिले निजामती सेवाअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले बेच्छन् । २५ जना सक्कली ड्राइभरले लाइसेन्स लिँदा नक्कली ड्राइभर ७५ ले लाइसेन्स किन्छन् । सुनिन्छ, हिजोआज मोटरसाइकल र स्कुटरको लाइसेन्स १० हजारमा बेचिन्छ । कार, जिपको २० हजार र हेभी लाइसेन्स ४० हजारमा बेचिन्छ । अब यसरी क्षमता नभएकाहरुले दाम खर्च गरेर किनेको लाइसेन्सले सवारीसाधन हाँक्ने होइन, हाँक्ने मान्छेले हो जो कमसल छ । यस्तो अवस्थामा कमसल ड्राइभरको स्वास्थ्य अवस्था गतिलै भए पनि दुर्घटना हुने सम्भावना त उत्तिकै हुन्छ । यस्ता समस्याहरुको जालोमा यातायात क्षेत्र लपेटिएको छ, यही कारणले आज यो देशका जनता गाडीबाट लडेरै सकिने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
अब अन्य पेसाका मान्छेको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामका कारण देश थला परेको त नांगो आँखाले पनि देखिएकै हो । बिरामी डाक्टर र रोगी ड्राइभरसमेत नेपाली जनताका लागि साढे सातको दशाको रुपमा देखिएका छन् । यो दशाबाट देशलाई मुक्त गर्न अब नेपाल सरकार कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । जनताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि, ठीक खालको स्वास्थ्य सेवा दिन डाक्टरहरुलाई कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने परिपाटी थालनी गरिनुपर्छ । डाक्टरलाई प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकलाई बराबर तलब दिएर खान–लाउन पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएर सरकारले बहुतै अन्याय गरेको खबरसमेत प्राप्त भएको छ । डाक्टरका पनि परिवार हुन्छन् । बा, आमा, छोराछोरी हुन्छन् । पढाउने, लेखाउने र पालनपोषणको खर्च नपुग्ने अवस्थामा उपचार गर्ने डाक्टरको मानसिक अवस्थै खल्बलिन सक्छ । दिमागै खल्बलिएको डाक्टरले ठीक उपचार गर्न सक्दैन । बिरामी बचाउनु पहिले सरकारले डाक्टर बचाउनुपर्छ ।
डाक्टर बचाएमात्र बिरामी बचाउन सकिन्छ । डाक्टरलाई मनग्य सुविधा र सुरक्षा दिनुपर्छ । यो दशा यसरी समाप्त पार्न सकिन्छ भने अर्को साढे सातवाला दशाको रुपमा रहेको ड्राइभरको स्वास्थ्य परीक्षण र स्वस्थलाई सवारी हाँक्न दिने काम गर्न कुनै पनि हालतमा ढिला गर्नैहुन्न । जति ढिलो हुन्छ उति जनता भीरबाट तल खस्दै जान्छन् । प्लिज ओली सरकार, देशभरिका डाक्टर र ड्राइभरको स्वास्थ्य परीक्षण गरिहाल । यी दुई साढे सातको दशाबाट देशलाई मुक्ति दिइहाल ।